'सांसद विकास कोषको नाममा पैसा बाँड्न मिल्दैन'
सांसद विकास कोषको प्रावधानले अब संवैधानिक चुनौती खप्नुपर्ने छ । यो संघीय अवधारणाबमोजिम को हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर मुलुकमा रहेको आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ७६१ वटा सरकारहरूलाई बिमुख गरेर पैसा कहाँ खर्च गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने अधिकार व्यस्थापिकालाई संविधानको कुन धाराले दिएको छ ? भन्ने प्रश्न छ । के कुनै व्यक्ति एकैपटक सरकार र सांसद दुवै हुनसक्छ ? संसद्ले पैसा खर्च गर्ने क्षमता दाबी गर्ने भए प्रतिपक्षको क्षमता दाबी गर्ने कि नगर्ने? प्रतिपक्षले हातमा पैसा लिएर सरकारको पारदर्शिता खोज्न सक्ला कि नसक्ला ?
पोहोरसम्मको परिप्रेक्ष फरक थियो । देशको संघीयाकरण भएको थिएन । निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय तह प्रतिनिधित्वविहीन थियो । त्यसैले सरकारले सांसदहरूले आफ्नो अनुकूल योजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । पोहोर उक्त कार्यक्रमका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको थियो ।